कोरोना उपचार सामग्री लिन गएको २२ टन क्षमताको वाइडबडी साढे ७ टन मात्रै बोकेर किन फर्कियो?
उत्तम काप्री शुक्रबार, चैत २१, २०७६, १७:२२
काठमाडौं- बिहान तीन बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज ल्यान्ड भयो। वाइडबडी जहाजले चीनको गोन्जाउबाट नेपाल उडान भरेको थियो। नेपाली समयअनुसार बेलुका ९ बजेर ४५ मिनेटमा उक्त जहाज गोन्जाउबाट उडान भरेको थियो।
तर, २२ टन क्षमताको जहाजले जम्मा ७ दशमलव ५ टन मात्रै सामान ल्यायो। वाइडबडी जहाजको क्षमता ४० टन हो। तर, सिट नझिकेको अवस्थामा २२ टनसम्म सामान बोक्न सक्छ।
उक्त जहाज चार्टर भने फ्ल्यास फ्राइट लजिस्टिकले गरेको थियो। उक्त कम्पनीले जहाज चार्टर गर्दै एक दर्जन भन्दा बढी व्यवसायीको सामान ल्याइदिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, जहाज बिहान काठमाडौं आइपुग्दा अधिकांश व्यवसायीको सामान नै आएन। साथै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सहयोगमा रुपमा बाँड्न भन्दै चीनबाट ल्याउन लागेको सामान पनि आएन।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार वितरण गर्न भन्दै संस्थाले ल्याउन लागेको सामान ३ सय केजी मात्रै थियो। बुधबार बेलुकासम्म सामान ल्याइदिने प्रतिबद्धता गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
सोहीअनुसार आज सामान दिनका लागि चेम्बरले कर्मचारी समेत खटाउँदै सबैलाई सामान दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, सामान के कारणले नआएको उनको कुनै जवाफ नपाएको नेपाल लाइभसँग बताए।
त्यति मात्रै नभई १ हजार २ सय केजी सामान ल्याइदिने र प्रतिकेजी १० डलर भाडा लाग्ने भनेर प्रतिबद्धता दिएको सनराइज सर्जिकिल हाउसको समेत सामान आएन। सामान नआएपछि हाउसले किन सामान आएन ? भनेर सोध्दा 'अफ लोड' (लोड धेरै) भएका कारण सामान ल्याउन नसकेको जहाज चार्टर कम्पनीले जानकारी गराएको छ।
जहाज चार्टर कम्पनीमा प्रतिनिधि नम्रता श्रेष्ठले जहाजमा ७ दशमल ५ टन मात्रै सामान आएको स्वीकार गरिन्। जब जहाज गोन्जावमा ल्यान्ड हुनासाथ विमानस्थलको भन्सारले सामानको स्पेसिफिकेसन क्लिएरेन्स हुनुपर्छ भन्दै चेक चाँज थालेपनि सामान छुटेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘हामीले नेपाल एयरलाइन्सलाई पूरै पैसा तिरेर जहाज लगेका हो,’ उनीले भनिन्, ‘ सामान नआउँदा हामी नै नोक्सानमा छौं। हामीले ४० टन सामान मध्ये २० टन सामान ल्याउने गरी गएका थियौं। सामान ल्याइदिने व्यापारीसँग पनि सामान ल्याएपछि मात्रै पैसा लिने हो। अहिले पैसा लिएका छैनौं।’ १८ देखि १९ वटा पार्टीको सामान आएको छ। तर, क-कसको कति आयो भन्नेचाहिँ भन्सार पास हुँदै जाँदा थाहा हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
भण्डारी सर्जिकल हाउस, ओम सर्जिकल कन्सर्न, एएस इन्टर प्राइजेज, एबोर्ट बायो टेक, कोइका इन्टर प्राइजेज, वेव टेडिङ र विकास सर्जिकल कन्सर्नको सामान पनि प्रतिबद्धता गरेर नल्याइदिएको रहस्य खुल्न आएको छ। जहाजमा वसन्त चौधरीले सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेको औषधी भने आएको छ।
जहाजमा आएको सामान मध्ये शंकर ग्रुपको मात्रै ७ टन सामान रहेको छ। शंकर ग्रुपको सबै कोरोना उपचार सामाग्री हुन् । स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपको सेटिङमा अन्य व्यवसायीको सामान नेपाल नआएको हो। चीनमा रहेका बिभिन्न संस्थाले सहयोग स्वरुप दिएको दुई टन सामान पनि आउन सकेन। शंकर ग्रुपले फल्यास फ्राइटको सेटिङमा अरुका सामान ल्याउन नदिएको बुझिएको छ। नेपालका नीजी अस्पतालमा पनि कोरोना उपचार सामाग्रीको धेरै माग छ। अरुको सामान रोकेर आफ्नो सामान महंगोमा बेच्ने उसको सेटिङ रहेको बुझिएको छ।